Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Samy tompon’andraikitra ange izany e !
Inty sy nday: Samy tompon’andraikitra ange izany e !
Lasa fifamaliana sy fanadiovan-tena ary fifampiampangana eo amin’ny vondron-kery Mapar sy ny Hvm ny famelabelarana nataon’ny Filohampanjakana teo aloha nandritra ny tetezamita Andry Rajoelina tamin’ny haino aman-jery teto an-toerana ny alahady lasa teo.
Raha zohiana iny famelabelarana nataon’i Andry Rajoelina iny dia mamatotra andraikitra ny fitondrana ankehitriny ny tsy fahitan’ny vahoaka ny anjara-masoandrony taorian’ny fifidianana filohampirenena tamin’ny 2013.
Ny zavatra tsy azo atao zinona aloha, matoa nahazo ny ampaham-bato betsaka kokoa ny kandida Rajaonarimampianina tamin’ireny fifidianana ireny raha mitaha amin’izay azon’ny mpifaninana taminy, Jean Louis Robinson, dia saika mbola nanana fanantenana ny hahavitan’ny mpiara-dia taminy tsaratsara kokoa ny maro an’isa. Amin’izao fotoana anefa dia zary diso fanantenana ny maro.
Dia indro fa nitandahatra niakatra fahitalavitra sy onjam-peo isan-karazany koa ny avy amin’ny fitondram-panjakana Hvm nitondra ny valin-kafany ho fanadiovan-tena, ka nanambara fa “tompon’antoka amin’izao fahasahiranana lalina mianjady amin’ny firenena izao ny fitondrana tetezamita notarihin’Ingahy Rajoelina.” Nisy koa ny nanipika fa “fitondrana niaraha-nitantana ny tetezamita fa tsy Rajoelina irery no tompon’andraikitra tamin’izy iny, ka tsy tokony atao mahagaga raha tsy nahitam-bokany”. Ny tsikaritra koa aloha dia saika ireo mpikambana ao amin’ny governemanta sy solombava na loholona tena naira-dia tao anatin’ny tetezamita no lohalaharana na noterena hitari-dalana amin’ny fanafokana iny fanazavana sy famelabelarana nataon-dRajoelina iny, sy nanaovana angoan-tenda ho fanadiovan-tena. Ry Ravalomanana moa dia mikapa ranjo ihany any ambadika any fa mody tsy miditra mivantana amin’iny raharaha iny, nefa dia tsy afaka andraikitra koa ireo noho izy ireo niditra nandray anjara tao anatin’ny tetezamita.
Na izany na tsy izany, tsy ny tsy fahombiazan’ny tetezamita teo na ny fihomboan’ny fahasahiranana nandritra ny tetezamita no ndeha hilazana fa fady ny miroso amin’ny tetezamita. Toy ny tsy azo ikimpiana koa fa nisy dia nisy ny zava-bita nandritra ny tetezamita na dia tsy tena namely tanteraka ny hetahetam-bahoaka aza.
Ny rafitra tetezamita mantsy raha ny tena tokony ho izy dia tsy araka ny fiheveran’ny olona sasany hoe “natao hizarana toerana ho an’ny mpanao pôlitika tsy lanim-bahoaka amin’ny fifidianana”. Natao handaminan-draharaha, hametrahana ny rafi-piaraha-monina tena takian’ny hetahetam-bahoaka, hanoritsoritana ny fandaharan’asa tokony hotanterahin’ny mpitondra aorian’ny fifidianana, tokony hamafana ny tokontanin’ny firenena izay nolotoin’ny mpitondra tsy nahavita azy ny tetezamita. Noho izany, raha mifantoka amin’ireo zaraasa tokony niantsorohany ireo ny tetezamita dia tsy ho toa ireny no fitrangany.
Ny zavatra tsy azo iadian-kevitra koa aloha anefa, raha ireo fifampiampangana sy endri-panadiovan-tenan’ny tsirairay ireo no ifotorana, dia tsy azo atao ny mikombom-bava fa samy tompon’andraikitra amin’izao fihomboan’ny fahantram-bahoaka izao ianareo rehetra mpisehatra pôlitika amin’izao fotoana, na ny ao anatin’ny fitondrana na ny ivelany, na ny mpitondra teo alohan’ny tetezamita na ny tao anatiny, izay niarahanareo, na ny ankehitriny. Samy nanaiky nobaikoin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ka samy nihazakazaka naka ny anjara-toerany tao, dia samy nitavana sy samy nanome lamosina ny vahoaka tao.
Ny hery pôlitika tsy nanaiky an’iny tetezamita nobaikoin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena iny izany no mendrika hitondra ny tany sy ny firenena.